Voting ရတဲ့ 2017 GAME AWARDS ဆန်ကာတင်စာရင်း – REDPlayer
Voting ရတဲ့ 2017 GAME AWARDS ဆန်ကာတင်စာရင်း
ဒီနှစ် 2017 Game Awards တွေအတွက်ဆန်ကာတင်စာရင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။စုစုပေါင်းဂိမ်းနဲ့gaming personalities ၁၀၂ကိုဒီနှစ်အတွက်ရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစာရင်းမှာ Nintendoက၂၃မျိုးနဲ့ အများဆုံးဖြစ်ပြီး Sony က၁၅မျိုး၊ Activision က ၇ မျိုးအသီးသီး ရွေးချယ်ခံထားရတာ တွေ့ပါတယ်။
တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးဂိမ်းအတွက်ဆန်ကာတင်စာရင်းမှာတော့The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, PUBG, Persona 5, and Horizon: Zero Dawn. Four games picked up six nominations to lead the way, including Destiny 2, Horizon: Zero Dawn, Super Mario Odyssey, and Breath of the Wild စတဲ့ဂိမ်းတွေပါဝင်ပါတယ်။
ပေးအပ်မယ့်ဆုအမျိုးအစားထဲမှာ Most Anticipated Game ဆုလည်းပါဝင်ပြီးအဲ့ဒီအမျိုးအစားအတွက် ဆန်ကာတင်စာရင်းမှာပါဝင်တာတွေကတော့ God of War, Spider-Man, Monster Hunter World, Red Dead Redemption II နဲ့ The Last of Us Part II တို့ ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချို့ game cata တွေက vote ပေးလို့ရပါတယ်။ vote ပေးချင်တဲ့သူတွေကတော့ ဒီမှာ (Event website) မှာသွားပေးလို့ရပါတယ်။
ဆုရစာရင်းကိုတော့လာမယ်ဒီဇင်ဘာ၇ ရက်မှာကျင်းပမယ့် The Game Awards အခမ်းအနားမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပေးသွားမှာဖြစ်တယ်တဲ့ခင်ဗျာ။
ဒီနှဈ 2017 Game Awards တှအေတှကျဆနျကာတငျစာရငျးထှကျပျေါလာခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။စုစုပေါငျးဂိမျးနဲ့ gaming personalities ၁၀၂ကိုဒီနှဈအတှကျရှေးခယျြထားတာဖွဈတယျလို့သိရပါတယျ။အဲ့ဒီစာရငျးမှာ Nintendoက၂၃မြိုးနဲ့အမြားဆုံးဖွဈပွီး Sony က၁၅မြိုး၊ Activision က ၇ မြိုးအသီးသီး ရှေးခယျြခံထားရတာ တှပေ့ါတယျ။
တဈနှဈတာအကောငျးဆုံးဂိမျးအတှကျဆနျကာတငျစာရငျးမှာတော့The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, PUBG, Persona 5, and Horizon: Zero Dawn. Four games picked up six nominations to lead the way, including Destiny 2, Horizon: Zero Dawn, Super Mario Odyssey, and Breath of the Wild စတဲ့ဂိမျးတှပေါဝငျပါတယျ။
ပေးအပျမယျ့ဆုအမြိုးအစားထဲမှာ Most Anticipated Game ဆုလညျးပါဝငျပွီးအဲ့ဒီအမြိုးအစားအတှကျ ဆနျကာတငျစာရငျးမှာပါဝငျတာတှကေတော့ God of War, Spider-Man, Monster Hunter World, Red Dead Redemption II နဲ့ The Last of Us Part II တို့ဖွဈပါတယျ။ vote ပေးခငျြတဲ့သူတှကေတော့ ဒီမှာ (Event website) မှာသှားပေးလို့ရပါတယျ။
ဆုရစာရငျးကိုတော့လာမယျဒီဇငျဘာ၇ ရကျမှာကငျြးပမယျ့ The Game Awards အခမျးအနားမှာထုတျပွနျကွညောပေးသှားမှာဖွဈတယျတဲ့ခငျဗြာ။
Tags awards developers nintendo
GTA V အတွက် DLC ရှိမလား